နည်းပညာ - Page9of 11 - ကွန်ပျူတာ နည်းပညာများ, နည်းပညာ software နှင့် နည်းပညာ blog
Website description meta tag optimization | Myanmar SEO Tutorials
ဒီတစ်ခေါက်တော့ website meta tag ကို optimize လုပ်တာကို သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာကို ဖတ်မယ့်သူတွေဟာ အရင်တစ်ခေါက်က website title tag optimization သင်ခန်းစာကိုလည်း ဖတ်ဖူးရပါမယ်။ အဲဒီသင်ခန်းစာကို ဖတ်ထားဖူးရင်တော့ ဒီသင်ခန်းစာအတွက် အချိန် သိပ်မပေးရတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီသင်ခန်းစာမှာ website တစ်ခုရဲ့ title tag နဲ့ meta tag ကို ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာပါ ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ blog မှာ ရေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေဟာ ဘာမှမသိတဲ့လူတစ်ယောက်က စပြီး အလယ်အလတ်သိတဲ့ လူတစ်ယောက်အထိ ဖတ်လို့ရအောင် ရေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိပြီးသားလူတွေလည်း ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိစေပါတယ်။ ကဲ .. သင်ခန်းစာ စရအောင်ဗျာ။
Joomla တင်နည်း – How to Install Joomla Website
အရင်တစ်ခေါက်က XAMPP ကို Install လုပ်တာကို ရှင်းပြပြီးခဲ့ပါပြီ။ တကယ်လို့ အဲ့ဒီpost ကိုမဖတ် ရသေးဘူး ဆိုရင် How to install Xampp XAMPP Install လုပ်တာကိုအရင်သွား ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Joomla website တစ်ခုကို Installation လုပ်တာကို သင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Joomla website ပုံစံကို လေ့လာဖို့အတွက် အရင်ဆုံး Singapore Web Design (web-designer.sg) ဝဘ်ဆိုက်ကို သွားပြီး စာမျက်နှာနဲ့ တည်ဆောက်ပုံတွေကို လေ့လာရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ Joomla Install လုပ်ပုံကို အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လေ့လာပါ။
w3schools ဒေါင်းလုပ် – Download w3schools.com for offline
Download, Web Design TutorialsMyoWin
ဟိုတစ်နေ့က အွန်လိုင်းမှာ စကားပြောဖြစ်တဲ့ထဲက တစ်ယောက်က w3schools.com ကို ဝင်ကြည့်ရတာ အခက်အခဲရှိတယ်၊ အချိန်ပြည့် ကြည့်ဖို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ offline ကြည့်လို့ရမယ့် version လေး ကျွန်တော့်မှာ ရှိနေတာနဲ့ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က လင့်ခ်မှာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
Update လုပ်ပေးထားပါတယ်။ အရင်လင့်ကို ဖျက်လိုက်ပါပြီး download လုပ်လိုသူများ အောက်က button ကိုနှိပ်ပါ။
XAMPP တင်နည်း – How to install XAMPP?
ဒီနေ့ကတော့ XAMPP ကို ကိုယ့်ရဲ့စက်မှာ ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာ သင်ပေးပါမယ်။ အရင်ဆုံး XAMPP ကို download လုပ်ရပါမယ်။ ကျွန်တော် ရေးထားတဲ့ What is XAMPP? ဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာမှာ download link ပေးထားပါတယ်။ ကဲ … download လုပ်ပြီးပြီလို့ ယူဆလိုက်မယ်ဗျာ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ စပြီး install လုပ်ရအောင်။
Website title tag optimization – Myanmar SEO Tutorials
မင်္ဂလာပါ.. ကျွန်တော်အလုပ်တွေများနေတာနဲ့ပဲ သင်ခန်းစာတွေတောင် မရေးဖြစ်တော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်၊ အခုလည်း အားတဲ့အချိန်လေး အချိန်လုပြီးတော့ သင်ခန်းစာတစ်ခု ရအောင် တင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ ရေးပြီးသား SEO သင်ခန်းစာတွေရဲ့ အဆက်ကို ဆက်ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်။